ပစ္စည်းကိရိယာများ | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
coded တီဗီကို Samsung decipher ကိုကူညီပါ?
Samsung တီဗီများ၏အမှတ်အသားကိုစစ်ဆေးရန်ကူညီပါသလား။ ပထမတစ်ချက်မှာ Samsung တီဗီများ၏အမည်များသည်အလွန်များပြားလှသည့်အက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များဖြင့်အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည်။ တကယ်တော့တစ်ခုခုကိုအက္ခရာအနည်းငယ်နဲ့ရှာတွေ့နိုင်တယ်။
အိမ်တွင်တိကျမှန်ကန်မှုရှိမရှိအီလက်ထရောနစ်မီးဖိုချောင်ပမာဏကိုမည်သို့စစ်ဆေးရမည်နည်း။ ဆေးဆိုင်များတွင်မှန်ကန်သောချိန်ခွင်များနှင့်အလေးများရှိကြသည်။ ၀ င်လာပြီးမိနစ်အနည်းငယ်မျှအလေးချိန်ကိုမေးပါ။
အဆင့်ပြောင်းကုန်ပြီ? ယင်းအဆင့်တွင်ပြောင်းကုန်ပြီကဘာလဲ? အပြောင်းအလဲအဘို့အကြောင်းပြချက်?
အဆင့်ပြောင်းမှုလား။ အဆင့်ပြောင်းမှုဆိုတာဘာလဲ အဆိုင်းဘာကြောင့်လဲ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရလျှင် - ပြောင်းလဲရန်အကြောင်းပြချက်များမှာ circuit တွင် reactive element များရှိနေခြင်းကြောင့်၎င်းတို့သည်စုဆောင်းခြင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများထုတ်ပေးခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါရေဝဲအင်ဂျင်ကို Shaubergera ၏နိယာမဆိုတာဘာလဲ
Schauberger vortex အင်ဂျင်၏လည်ပတ်မှုနိယာမကဘာလဲအထူးပုံစံ၏ရေဝဲကိုဖန်တီးရာတွင် donut တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် donut ကိုယ်တိုင်၏ဗဟိုနှင့်အချင်းဝက်ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုတပြိုင်တည်းစီးဆင်းစေသည်။ သို့သော်…
မဆိုးငါကပို amperage နှင့်အတူ charging ဖုန်းကိုအားသွင်းဖို့ရှိသည်?
သင့်ဖုန်းအားအားကြီးသောအားသွင်းစက်ဖြင့်အားသွင်းခြင်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်မဟုတ်လော။ အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် display သည် (ချက်ချင်းမဟုတ်ဘဲတဖြည်းဖြည်းချင်း) လောင်ကျွမ်းသွားနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည်ပြသမှုတွင်မည်သည့်အရာကမျှမြင်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
အဆိုပါကွိုင်၏ induction တိုင်းတာဖို့ကိုဘယ်လို
ကွိုင်၏ inductance ကိုတိုင်းတာနိုင်ပုံဒါဟာအခမဲ့အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ inductance ကိုတိုင်းတာခြင်းသည်လွယ်ကူသောအလုပ်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် DC multimeter တစ်ခုတည်းနှင့်ဖြေရှင်း။ မရပါ။ ချဉ်းကပ်မှုများစွာရှိသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအရာ, inductance ...
ရေဒီယိုအချိန်မော်စကို DCF-77 အချက်ပြပါသလား
DCF-77 သည်မော်စကိုတွင်အလုပ်လုပ်သောတိကျသောအချိန်ရေဒီယိုအချက်ပြမှုလား။ DCF77 transmitter သည်ဂျာမနီ၊ Mainflingen တွင်တည်ရှိပြီး (Frankfurt am Main ၏အရှေ့တောင် ၂၅ ကီလိုမီတာ) ၇၇.၅ kHz ကြိမ်နှုန်းဖြင့်စွမ်းအားရှိသောစွမ်းအားဖြင့်လည်ပတ်သည်။
ဒီ chip ကိုကားအဘယ်သို့ ??? က ???? HEF4094BP လို့ခေါ်ပါတယ်အဖြစ်
ဒီမိုက်ကရိုဝိုင်မှာဘာလဲ ??? ???? HEF4094BP http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/17726/PHILIPS/HEF4069UBP.html link ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖြင့်ပိတ်ဆို့ထားခြင်း link converter HEF4094BP ရုရှား analogue KR1561PR1 ဒစ်ဂျစ်တယ် microcircuit ကုဒ် converter ရှစ်-bit ပြောင်းလဲမှုမှတ်ပုံတင်။ အမှတ်စဉ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် ...
သူကားအဘယ်သူမျှမထိုကဲ့သို့သောကို item အဆိုပါ console နဲ့တီဗီ Menu ထဲမှာရှိအဟောင်းတီဗီဖိလိပ္ပုအပေါ်လိုင်းများကို set up ဖို့ဘယ်လိုသိသနည်း
အဝေးထိန်းများနှင့်တီဗီမီနူးတို့တွင်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းမရှိသည့် PHILIPS TV ဟောင်းတစ်ခုတွင်လိုင်းများကိုမည်သို့ညှိရမည်ကိုမည်သူသိသနည်း။ မီနူးမှာအရာအားလုံးရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ "ချန်နယ်ချခြင်း" မဟုတ်ပါ ...
ကင်မရာကနေ run ထားတဲ့ပုံကိုသိသလော Nikon D3100
ကင်မရာရဲ့အကွာအဝေးကဘာလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုရှာဖွေရမလဲ။ Nikon D3100 ကင်မရာအကွာအဝေးမှာအဆိုးဆုံးမဟုတ်ပါ။ ကျောင်းမှာစာမေးပွဲမှာကလေးတွေကဘယ်လိုဖြေကြသလဲ၊ ဘာတွေသိလဲ၊
အထဲမှာဘာငါ့ကိုပြောပြပါနှင့်ရေနံစုပ်စက် jack ကိုအပြေး ကျေးဇူးပြု. ? ၎င်း၏အမေရိကန်နိုင်ငံသားလည်းသူ၏ဦးခေါင်းကိုလှုပ်မြည်းကိုခေါ်
ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုရေနံစုပ်စက်ဘယ်လိုစီစဉ်သလဲ၊ အမေရိကန်တွေကဒါကိုမြည်းခေါင်းကိုလှုပ်ပြီးမြည်းခေါင်းကိုလှုပ်ပြီးမြည်းဟုခေါ်ကြသည်။ ပစ္စတင်ကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုသည်ပထမဆုံးအစတွင်စစ်ဆေးသောအဆို့ရှင်ရှိသည်။
ငါ "Dummies for electrician" လိုစာအုပ်ရှာနေပါတယ်
ငါ "Dummies for electrician" အမျိုးအစားစာအုပ်ကိုငါရှာနေပါတယ်။ အင်တာနက်ပေါ်မှာငါမဂ္ဂဇင်းအခမဲ့အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိတယ်။ Rudolf Svoren "အီလက်ထရွန်နစ်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်" 1986 ခုနှစ်။ သူကိုယ်တိုင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်မစခဲ့ပါ။ ဤစာအုပ်အားဖြင့်များစွာသော ...
AF နှင့် TA လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအဘို့အလော စတီရီယိုစနစ်များပျေါအဘယျတဲ့ function ကို: AF နှင့် TA? သူတို့ဘာလုပ်သလဲ?
AF နှင့် TA လုပ်ဆောင်ချက်များသည်အဘယ်နည်း။ AF နှင့် TA ရေဒီယိုရှိလုပ်ဆောင်ချက်များမှာအဘယ်နည်း။ သူတို့ဘာလုပ်နေတာလဲ? AF ။ အခြားရွေးချယ်စရာကြိမ်နှုန်းစာရင်းပြသမှုတွင်ရွေးချယ်သောကြိမ်နှုန်း၏စာရင်းတစ်ခုပေါ်လာသည်။
ping ရဲ့အင်ဂျင် Megger တူသော?
အင်ဂျင်ကို megohmmeter နဲ့ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲ။ megohmmeter သည်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သင်သည် megohmmeter ၏အဆက်အသွယ်တစ်ခုကို motor housing နှင့်လည်းကောင်း၊ နောက်တစ်ခုက winding terminal နှင့်ဆက်သွယ်ပြီးမြန်မြန်မြန်လေလေဖြစ်သည်။ မြှားလိုက်ရင် ... အိုကေ
ဘယ်သူကမီးသီးကိုအရင်တီထွင်ခဲ့တာလဲ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ရှေးအချိန်ကဗာဗုလုန်တွင်ပထမဆုံးမီးလုံးနှင့်ဘက်ထရီကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ငါတို့သိတဲ့တီထွင်မှုတွေဟာသိပ္ပံပညာဆိုင်ရာကူးစက်မှုသာဖြစ်သည်။
DVD စက်ကို USB flash drive ကိုမဖတ်လို့ရပါတယ်
ဒီဗီဒီဖွင့်စက်သည် USB ချောင်းမဖတ်ပါ။ သင်၏ flash drive ဖိုင်စနစ်ကားအဘယ်နည်း။ မကြာသေးမီက NTFS နှင့် FAT32 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သေချာတာကသင် NTFS ကိုသုံးနေသည်။
ပိုကောင်းတဲ့အရာဟူမူကား, rosin, ဂဟေအမဲဆီသို့မဟုတ်အက်ဆစ်?
ပိုကောင်းတဲ့အရာ - ဆေးသေတ္တာ၊ အဆီသို့မဟုတ်အက်ဆစ်ကိုဂဟေဆက်ခြင်းလား။ ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းမေးပါ။ မင်းဘာဂဟေဆက်သွားမှာလဲ သူတို့ကမင်းကိုမကောင်းတဲ့အရာတွေကိုသင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ သံဖြူသည်သတ္တုနှင့် ကပ်၍ မကပ်လိုပါကအက်ဆစ်ဖြင့်ကုသပါ။ AND ...
MEGABIT တစ်ခုမည်မျှရှိသနည်း။ သေချာတာပေါ့ ..
MEGABIT တစ်ခုမည်မျှရှိသနည်း။ အနီးစပ်ဆုံး၊ megabit သည်အချက်အလက်ပမာဏနှင့် megabyte တို့၏တိုင်းတာမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမြန်နှုန်းကို megabits / s သို့မဟုတ် megabytes / s ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ တစ်စက္ကန့်တိုင်းအတွက် "တစ်စက္ကန့်" တွင်
အဆိုပါရဟတ်ကဘာလဲ? အဆိုပါ stator ကဘာလဲ? အရ pobrodnee pliz
ရဟတ်ဆိုတာဘာလဲ ဓာတ်ပေါင်းဖိုဆိုတာဘာလဲ လှည့်လည် pliz ROTO- လှုပ်ရှားမှု, လည်ပတ်တွင်။ stator သည်ငြိမ်လျက်၊ လျှပ်စစ်စက်များတွင်နှစ်မျိုးလုံးအကွေ့အကောက်များနိုင်သည်။ ဝီကီပီးဒီးယား။ DC မော်တာ။
အိမ်တွင်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်မီးလုံးပြုလုပ်နည်း။ DRL အဝတ်စတစ်ထည်ကိုထုပ်။ အပြင်ဘက်မီးသီးကိုခွဲပါ။ (CAUTION MERCURY!) မီးအိမ်၏အတွင်းပိုင်းသည်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၏ "လင်းကျောက် burner" ဖြစ်သည်။ အသုံးပြု၍ ဆက်သွယ်သည် ...
56 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 40,179 စက္ကန့်ကျော် Generate ။